Pokémon Cafe Mix dia piozila vaovao sy traikefa nahafinaritra | Androidsis
Manaova fomba fahandro amin'ny alàlan'ny famolavolana rojo amin'ny taila Pokémon ao amin'ny Pokémon Cafe Mix
Pokémon Cafe Mix no vaovao indrindra amin'ny The Pokemon Company ho ankamantatra mihantona be io ary manana mekanika tena liana. Tsy maintsy mamorona rojo miaraka amin'ireo mari-pamantarana rojo aho mba hamita ny haavony rehefa tsy maintsy manodidina ny cubes siramamy sy zavatra hafa isika.
Lalao misy fihodinana tena miavaka amin'ny maso miaraka amin'ireo sary ireo ary famolavolana toetra toy ny miloko sola miloko. Ao amin'io lafiny io no anaovan'i Pokémon Cafe Mix fisolokiana hatramin'ny fotoana voalohany ary ahitanao fa ny ekipa mpamolavola azy dia niezaka mafy hanome antsika traikefa manokana. Ataovy.
1 Tena tsara tarehy maso ary miaraka amin'ny mekanika izay manantona
2 Hanitatra ny fisakafoanana misy anao amin'ny resipeo vaovao ao amin'ny Pokémon Cafe Mix
3 Traikefa manan-talenta
Tena tsara tarehy maso ary miaraka amin'ny mekanika izay manantona
Pokémon Cafe Mix no lalao mahazatra anaovana izany saika handalo ny dinika rehetra ianao ary efijery mpanelanelana ho lasa ambaratonga iray hafa. Izany dia satria ny mekanika famoronana rojo miaraka amin'ireo sombin'ilay Pokémon iray ihany dia tena manintona satria tena intuitive.
Andao lazaina fa rehefa manery ny efijery amin'ny token Pokémon isika dia afaka manampy bebe kokoa amin'ilay rojo amin'ny alàlan'ny rantsan-tànantsika. Manana ianao bara izay mametra ny fotoana tokony hamoronanao ilay rojo ary arakaraka ny ahazoana sombin-tsakafo ny isa betsaka; tahak'izy ireo ihany koa ny fanimbana bebe kokoa raha toa ka manodidna an'io vatokely siramamy io na singa iray manan-danja amin'ilay resipeo noforoninay.
Ary io Pokémon Cafe Mix io dia mendrika ny ho eo alohan'ny trano fisakafoanana izay tsy maintsy andraisantsika Pokémon vaovao izay ho ampahany amin'ny mpanjifanao. Eny, ireo Pokémon rehetra fantatsika amin'ny lalao hafa ireo dia eto avokoa; fa tamin'ny andro lasa izay dia nandefa lalao hafa natokana ho an'ny ankizy kely ao an-trano ihany koa izy ireo ary mandray fahazarana vaovao hanadiovana ny nifiny.
Hanitatra ny fisakafoanana misy anao amin'ny resipeo vaovao ao amin'ny Pokémon Cafe Mix
Pokémon Cafe Mix dia lalao manolotra atiny maro ary amin'izany rehefa mandeha ny fotoana dia hanana fotoana be ianao hamaha Pokémon vaovao sy hanitatra ny cafeteria anao. Ny zavatra dia momba ny fanomanana fomba fahandro amin'ny alàlan'io mekanika lalao io izay nanangonana an'ireo mari-pamantarana rehetra ireo.
Rehefa mifamatotra amina mari-pamantarana marobe kokoa isika dia afaka mahazo hery manokana ary afaka mampitambatra azy ireo izany ka miteraka vokatra lehibe kokoa. ny Pokémon izay lasa ampahany amin'ny ekipanay Hanana fahaiza-manao manokana izy ireo izay afaka manampy antsika hanomana fomba fahandro iray na iray hafa, noho izany dia mila mitandrina isika amin'izay olona napetrakay ho tompon'andraikitra amin'ny fomba fahandro hahafahany manamboatra azy.
Tsy lalao handalovanao ambaratonga tsirairayFa kosa, tokony hihaino tsara ny fahaizana sy ny fanitarana ny cafeteria isika mba hanohizantsika ny fanaovana fandrosoana sahaza. Ary satria amin'ny Espaniôla dia mora kokoa ny zava-drehetra.
Pokémon Coffee Mix mamela tsiro be ao am-bavantsika rehefa milalao azy isika. Manana io teboka io izay mifamatotra amin'ny Sekolin'ny Cooking SpongeBob sy izany izahay dia nanome anarana ny lalao milay tamin'ny volana lasa, noho izany dia amporisihinay an-karihary izahay satria toa ho tsy fanararaotana hafa amin'ny vanim-potoana io.
Amin'ny lafiny ara-teknika dia tena niasa tsara tamin'ny fizika rehetra momba ny zavatra izay tratrarina tamin'ny karatra rojo vy ary ny fahitana azy no tsara indrindra hitantsika, nandinika azy io hatrany amin'ny fomba fijerin'ny sary sy ny sary. Ny famolavolana ny endri-tsoratra dia tena ary mariho ny maha-matihanina azy ireo amin'ity lafiny ity. Manana ny maha izy azy izy ary mahafinaritra ny mahita an'ireny sary ireny eo amin'ny efijery.
Pokémon Cafe Mix dia lalao ankamantatra mahafinaritra manasa anao izahay hilalao manomboka anio izay namoahana azy ao amin'ny Google Play Store. Aza adino ny fotoana voatondro, satria mbola hanana lalao ianao mandritra ny fotoana kelikely.
Puzzles Pokémon mahazatra mahazatra izay ahafahanao manana kofehy rojo vy fipoahana sy mandroso amin'ny atiny.
Ny mekanika lalao dia milay be
Ny famolavolana ny endri-tsoratra sy ny fikolokoloana ny tenin'izy ireo
Miovaova amin'ny filalaovany
Tsy ampifanarahana amin'ny efijery 18: 9 izy io
Pokemon Coffee ReMix
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Manaova fomba fahandro amin'ny alàlan'ny famolavolana rojo amin'ny taila Pokémon ao amin'ny Pokémon Cafe Mix
Pokémon UNITE dia nanambara, MOBA 5V5 novolavolain'ny Tencent Games